မြန်မာ Idol Winner ဖြစ်ပြီး ၇ လ အတွင်း ဖြိုးမြတ်အောင် နဲ့ သူ့ပရိသတ်များက အလှူငွေပေါင်း 15,752,500 ကျပ်တိတိ လှူဒါန်းပြီး...! - Thadin
HomeCELEBRITYမြန်မာ Idol Winner ဖြစ်ပြီး ၇ လ အတွင်း ဖြိုးမြတ်အောင် နဲ့ သူ့ပရိသတ်များက အလှူငွေပေါင်း 15,752,500 ကျပ်တိတိ လှူဒါန်းပြီး…!
မြန်မာ Idol Winner ဖြစ်ပြီး ၇ လ အတွင်း ဖြိုးမြတ်အောင် နဲ့ သူ့ပရိသတ်များက အလှူငွေပေါင်း 15,752,500 ကျပ်တိတိ လှူဒါန်းပြီး…!
March 12, 2019 Kay Kay CELEBRITY Comments Off on မြန်မာ Idol Winner ဖြစ်ပြီး ၇ လ အတွင်း ဖြိုးမြတ်အောင် နဲ့ သူ့ပရိသတ်များက အလှူငွေပေါင်း 15,752,500 ကျပ်တိတိ လှူဒါန်းပြီး…!
အလှူငွေပေါင်း 15,752,500 ကျပ်တိတိ
Myanmar Idol သီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲမှာ ထူးခြားလှတဲ့ အဆိုတော် ၁ ဦးပါ။ အံမခန်းတဲ့ ပရိတ်သတ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး season3winner ဖြစ်ပြီးကတည်းက ပရဟိတဘက်မှာရော ကြော်ငြာရိုက်ကူးခြင်း လုပ်ငန်း ရှိုးပွဲတွေ လိုက်လံဖြေဖျော်မှုများ နဲ့ မနားတမ်း အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဂီတလူငယ်တဦးပါ။
သူ့မှာ ထူးခြားတာက ထောင်လွှားမှု မရှိတာပါပဲ။ ပရိတ်သတ်နဲ့ရော မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချစ်ချစ်ခင်ခင် ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနေသူပါ။
ဒါ့အပြင် ကျေးဇူးရှင် ဆရာသမားများကိုလည်း မမေ့မလျော့ ကျေးဇူးသိတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။
မကြားသေးခင်ကလည်း ဖြိုးမြတ်အောင်ဟာ သာသနဘောင်မှာ ရှင်သာမဏေ အဖြစ်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ဖြိုးမြတ်အောင် ရဲ့ we love မိသားစုများ စုပေါင်း လှူဒါန်း တဲ့ အလှူငွေစုစုပေါင်းကို ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်မှာတော့ စရင်းဇယားနဲ့ တိကျစွာ အခုလို ဖော်ပြထားပါတယ်။
Winner ဖြစ်ပြီးတော့ (၇) လတာ ကာလအတွင်းမှာ ဖြိုးလေးနဲ့ပရိသတ်မိသားစုတွေရဲ့ စုပေါင်းလှူဒါန်းခဲ့မှုဟာ (15,752,500) ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။
(11.3.19) ရက်နေ့အထိ မတည်ငွေစာရင်း လက်ကျန်ကတော့ (2,792,570) ကျပ်တိတိပါ။
လောလောဆယ်ကတော့ ကိုးနဝင်းဘုရား ထီးတင်ပွဲအလှူရှိလို့ ကျန်တဲ့အလှူတွေကို ခဏ နားထားပါတယ်။
မိသားစုတွေအနေနဲ့ နောင်လုပ်မယ့် ပရဟိတ အလှူအတန်းတွေအတွက် မတည်ငွေအဖြစ်လည်း ထည့်ဝင်ပေးချင်ရင်တော့ AYA bank account တခုတည်းကနေသာ လက်ခံပေးမှာပါ။ လှူတဲ့အခါကျရင်လည်း စာရင်း အတိအကျ ချပြပြီး လှူဒါန်းပေးသွားမှာပါ။
AYA bank account – 0021222013457408, Account name – U Zaw Zaw + 2,
#ဆက်သွယ်ရန် – ဒေါက်တာဖြိုးပိုင်စိုး (09960955450) #ငွေလွှဲပြီးတိုင်း ဆက်သွယ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ နော်ဆိုပြီး ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဂုဏ်ယူပါတယ် အဂ္ဂနီရေ။ ထာဝရ အောင်မြင်ပါစေ။ ဘာပဲလုပ်လုပ် အခုလို စရင်းအတိအကျနဲ့ ပရိတ်သတ်ကို ချပြတာ သူမတူတဲ့ ကောင်းသော လုပ်လုပ်ပါ။
Myanmar Live – လတ်တလော မြန်မာ့သတင်းများ
မွနျမာ Idol Winner ဖွဈပွီး ရ လ အတှငျး ဖွိုးမွတျအောငျ နဲ့ သူ့ပရိသတျမိသားစုမြားက သိနျး 15,752,500 ကပျြတိတိ လှူဒါနျးပွီး
Myanmar Idol သီခငျြးဆို ပွိုငျပှဲမှာ ထူးခွားလှတဲ့ အဆိုတျော ၁ ဦးပါ။ အံမခနျးတဲ့ ပရိတျသတျကို ပိုငျဆိုငျထားပွီး season3winner ဖွဈပွီးကတညျးက ပရဟိတဘကျမှာရော ကွျောငွာရိုကျကူးခွငျး လုပျငနျး ရှိုးပှဲတှေ လိုကျလံဖွဖြေျောမှုမြား နဲ့ မနားတမျး အလုပျလုပျနတေဲ့ ဂီတလူငယျတဦးပါ။
သူ့မှာ ထူးခွားတာက ထောငျလှားမှု မရှိတာပါပဲ။ ပရိတျသတျနဲ့ရော မိတျဆှေ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ခဈြခဈြခငျခငျ ပြျောရှငျစှာ ဖွတျသနျးနသေူပါ။
ဒါ့အပွငျ ကြေးဇူးရှငျ ဆရာသမားမြားကိုလညျး မမမေ့လြော့ ကြေးဇူးသိတတျသူဖွဈပါတယျ။
မကွားသေးခငျကလညျး ဖွိုးမွတျအောငျဟာ သာသနဘောငျမှာ ရှငျသာမဏေ အဖွဈဝငျခဲ့ပါတယျ။
ဒီတဈခါမှာတော့ ဖွိုးမွတျအောငျ ရဲ့ we love မိသားစုမြား စုပေါငျး လှူဒါနျး တဲ့ အလှူငှစေုစုပေါငျးကို ခဈြပရိသတျတှအေတှကျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ဖွိုးမွတျအောငျ ရဲ့ we loveမိသားစု အဖှဲ့သားမြားက ဖွိုးမွတျအောငျ winner ဆုရပွီး ရလ အကွာမှာ သိနျး 15,752,500ကပျြတိတိကို လှူဒါနျးနိုငျပွီ ဖွဈကွောငျး ပွောထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျယကျမှာတော့ စရငျးဇယားနဲ့ တိကစြှာ အခုလို ဖျောပွထားပါတယျ။
Winner ဖွဈပွီးတော့ (၇) လတာ ကာလအတှငျးမှာ ဖွိုးလေးနဲ့ပရိသတျမိသားစုတှရေဲ့ စုပေါငျးလှူဒါနျးခဲ့မှုဟာ (15,752,500) ကပျြ ဖွဈပါတယျ။
(11.3.19) ရကျနအေ့ထိ မတညျငှစောရငျး လကျကနျြကတော့ (2,792,570) ကပျြတိတိပါ။
လောလောဆယျကတော့ ကိုးနဝငျးဘုရား ထီးတငျပှဲအလှူရှိလို့ ကနျြတဲ့အလှူတှကေို ခဏ နားထားပါတယျ။
မိသားစုတှအေနနေဲ့ နောငျလုပျမယျ့ ပရဟိတ အလှူအတနျးတှအေတှကျ မတညျငှအေဖွဈလညျး ထညျ့ဝငျပေးခငျြရငျတော့ AYA bank account တခုတညျးကနသော လကျခံပေးမှာပါ။ လှူတဲ့အခါကရြငျလညျး စာရငျး အတိအကြ ခပြွပွီး လှူဒါနျးပေးသှားမှာပါ။
#ဆကျသှယျရနျ – ဒေါကျတာဖွိုးပိုငျစိုး (09960955450) #ငှလှေဲပွီးတိုငျး ဆကျသှယျပေးဖို့မမပေ့ါနဲ့ နျောဆိုပွီး ဖျောပွထားပါတယျ။
ဂုဏျယူပါတယျ အဂ်ဂနီရေ။ ထာဝရ အောငျမွငျပါစေ။ ဘာပဲလုပျလုပျ အခုလို စရငျးအတိအကနြဲ့ ပရိတျသတျကို ခပြွတာ သူမတူတဲ့ ကောငျးသော လုပျလုပျပါ။
အိမ်အကူမိန်းကလေးကို မျက်လုံးတစ်လုံးနှင့် မျက်နှာတစ်ခြမ်းပျက်စီးစေသည်အထိ အက်စစ်ဖြင့်လောင်းခဲ့သော အိမ်ရှင်အမျိုးသမီးအား အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် ခုနစ်နှစ်ကျခံစေရန် ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်တရားရုံးက အမိန့်ချ…!
Total Users : 595833
Total views : 2737296